Falcelintii Uu Sameeyey Frenkie de Jong Markii Ay Taageereyaal U Dhow Ku Qayliyeen 'Erik Ten Hag Ayaa Ku Sugaya' - GOOL24.NET
Falcelintii Uu Sameeyey Frenkie de Jong Markii Ay Taageereyaal U Dhow Ku Qayliyeen ‘Erik Ten Hag Ayaa Ku Sugaya’
Taageereyaasha kubadda cagta ayaa ku qayliyey ‘Erik ten Hag’ ayaa ku sugaya iyadoo uu xiddiga Barcelona ee Frenkie de Jong uu maqlayo, taas oo keentay inuu sameeyo falcelin degdeg ah xilli uu sii kordhayo wararka ku xidhiidhinaya Manchester United.
De Jong ayaa waxa uu safka hore kaga jiraa qorshaha tababaraha cusub ee Manchester United ee Erik ten Hag oo doonaya inuu ka bud-dhig uga dhigo dhismaha Manchester United.
25 jirkan oo ciyaaray kulankii A-League All-Sars ee xiddigaha ee toddobaadkan ka dhacay Accor Stadium, ayay taageereyaashu u sacabiyeen markii uu garoonka kasii baxayay iyadoo uu midkood ku qaylinayey ‘Ten Hag ayaa ku sugaya’, iyadoo uu laacibkanna waqtigaas u gacan-haadiyey taageereyaasha.
De Jong oo marayay meel u dhow taageeraha ku qaylinayay kalmadan ayaa sii waday inuu jamaahiirta sacabka u tumo, waxaase la arkayay inuu dhoola-caddeeyey markii ay kalamadaasi dhegihiisa kusoo dhaceen, iyadoo uu ka gaabsaday inuu jalleeco taageeraha ku qaylinayay ereyadaas.
Taageereyaasha Manchester United ayaa iyaguna kaga falceliyey baraha bulshada, waxaanay isku raaceen in uu laacibkani kooxdooda imanayo iyaga oo ka duulaya falcelinta uu sameeyey Frenkie de Jong.
De Jong oo saddex sannadood ay ka hadhsan yihiin qandaraaskiisa Barcelona ayay warar kala duwan kasoo baxayaan mustaqbalkiisa, waxaana la sheegayaa in kooxda reer Spain ay ka fiirsanayso inay lacag ku beddelato laacibkan oo ay masuuliyiinta kooxdaas qaarkood ku doodayaan inay ka maarmi karayaan maadaama ay haystaan ciyaartooyo u badan da’yar, isla markaana uu naadiga kusoo fool leeyahay Franck Kessie.
Xavi Hernandez ayaa isaguna marar badan ku celceliyey in Frenkie de Jong uu kooxdiisa u yahay xubin muhiim ah oo uu doonayo inuu sii joogo, hase yeeshee waxa uu ka gaabsaday inuu si rasmi ah u sheego in aan la iibin doonin oo uu joogayo Camp Nou.